babimild, Author at Babi Mild Moms Club - Page3of 34
1. Thet Thanzin Phyo သမီးလေးက ၂ လပါရှင့်။ နှာခေါင်းထဲမှာ နှပ်ချီးခြောက်တေရောက်လာရင် မအိပ်နိုင် နို့မစို့နိုင်ဖစ်လာလို့ပါ။ Burmetonလည်းတိုက်ပါတယ်။ နှာခေါင်းထဲလည်း N.s အစက်ချဆေးလည်းထည့်ပါတယ်။ မသက်သာလို့ပါ။ နှပ်ချီးခြောက်တေကို ဘယ်လိုများဖယ်ရှားပေးသင့်ပါသလဲရှင်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရေဓါတ်နည်းနေတဲ့အခါမျိုး၊ ကလေးရဲ့ နှာခေါင်းအတွင်းမှာ ရေဓါတ်နည်းနေတဲ့အခါမျိုး စသဖြင့် အခြေအနေတွေမှာ ဖော်ပြပါ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ကလေး နေတဲ့၊ အိပ်စက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရေငွေ့ ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ Humidifier မျိုးလေး ထားပေးပါ… ဒါဆိုရင် ဒီလို ပြဿနာက သက်သာလာပါလိမ့်မယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild ———————————————- 2. Thae Su Su Aung မိခင်က ကော်ဖီသောက်ထားရင် ကလေးကမျက်စိကြောင်တတ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားရှင့်။ မိခင်နို့ဟာ […]
အရပွေားဆိုတာ ခန်ဓာတဈခုလုံးကို ဖုံးထားတယျ။ အရပွေားဟာ တဈခြိနျလုံး အဆကျမပွတျ လှုပျရှားအလုပျတှေ အမြားကွီးလုပျနတေယျ။ ပွောငျးလဲနတေတျတယျ။ အရပွေားအလုပျတှေ အကွောငျးကို နားလညျစခေငျြပါတယျ။ (ထိခိုကျဒဏျရာမှ ကာကှယျပေးခွငျး) အရပွေားမှာရှိတဲ့ ဆဲလျလေးတှေ တဈခုနဲ့တဈခု ထိကပျပူးပေါငျးဖှဲ့စညျးထားတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရပွေားကို ဖိမိ၊ ထိမိ၊ ပှတျမိရုံနဲ့ အရပွေားက ပကျြစီးမသှားနိုငျဘူး။ အရပွေားအောကျက အဆီထုက ကာကှယျပေးထားပါတယျ။ (ရမေဝငျအောငျ ကာကှယျပေးခွငျး) Keratinocyte လို့ချေါတဲ့ အရပွေားဆဲလျလေးတှကေ ဆကျပွီး၊ အလှာအခပျြလေးတှနေဲ့ အဆီကြိတျတှကေ ထှကျတဲ့ အဆီလှာလေးကလညျး ရဖေောကျမဝငျနိုငျအောငျ ကာကှယျထားတယျ။ ဒီလိုပဲ ခန်ဓာကိုယျထဲက ရဓောတျကို မဆုံးရှုံးအောငျ ကာကှယျနိုငျစှမျးလညျးရှိတယျ။ ခန်ဓာကိုယျထဲက ရဓောတျမဆုံးရှုံးအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ (ခန်ဓာကိုယျ ဆနျ့နိုငျ၊ ကြုံနိုငျခွငျး) အရပွေားမှာရှိတဲ့ ကျောလဂငျြလို့ချေါတဲ့ အမြှငျလေးတှနေဲ့ […]